Qaahira, maxaa lagu arkaa magaalada weligeed ah | Wararka Safarka
Qaahira, maxaa lagu arkaa magaalada aakhiro
Mariela Carril | | Qaahira, Maxaa la arkaa
Hadday adduunka ka jirto magaalo aan caadi ahayn, magaaladaasi waa Qaahira. Suugaan, qarsoodi ah, wali waxay nagu caqabadeysaa taariikheedii millenary iyo inkasta oo aysan waligeed aheyn waqti wanaagsan oo la booqdo hadana ma jirto wado looga saaro aayaheena.
Suuqyada, jidadka, masaajidda, Niilka, Ahraamta, maraakiibta dalxiiska iyo Matxafka Masaarida ee waxyaabaha qadiimiga ah ayaa na sugaya maxaa yeelay xitaa hal mar noloshaada waa inaad booqataa Masar iyo waxyaabaha layaabka leh. Aad uma jeceshahay xaaladda siyaasadeed ee hadda jirta aadna waad uga shakisan tahay? Adigu xikmad baa tahay, laakiin waxaan u maleynayaa in ka dib markaan aqriyay maqaalkayga maanta shakigaas uu isu rogi doono damac. Bal eeg waxa lagu booqdo Qaahira. Iyo waxa aan la iloobin.
1 Qaahira, xaqiiqooyinka qaar in maskaxda lagu hayo
2 Maxaa lagu booqanayaa Qaahira
Qaahira, xaqiiqooyinka qaar in maskaxda lagu hayo
Xitaa haddii aanaan jeclayn magaalooyinka, qofna ma mari karo Masar isagoon maalmo dhowr ku qaadan caasimadda maxaa yeelay waa habka ugu fiican ee lagu ogaan karo laguna soo cibro qaadan karo nolosha Masaarida iyo waxyaabaha ka duwan. Cimilada ayaa ah mid dhexdhexaad ah oo qoyaankeedu hooseeyo sanadka oo dhan, laakiin xagaaga wuu xiiqi karaa. Inta lagu jiro bisha Luulyo heerkulbeeggu wuxuu kacayaa 36 ºC tan ugu yarna waa ilaa 21 ºC. Haddii aad dooran karto goorta aad aadayso, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso bisha Janaayo maaddaama heerkulka heerkulku u dhexeeyo 21 ºC iyo 15 ºC. Inta lagu jiro bilaha Maarso, Abriil iyo Juun dabeylaha Khamaseen waxay ka soo dhacaan lamadegaanka ka dibna waxay keenaan heer kulka sare iyo ciidda.
Guryo badan ayaa ku yaal magaalada, in ka badan 75 hudheelo oo isugu jira noocyo kala geddisan iyo qaar aragtiyo cajaa’ib leh ka leh Niilka ama Ahraamta. Waxa kale oo jira hoyyo jaban iyo hudheelo qurxoon. Qaahira waxay leedahay nidaam gaadiid dadweyne leh basaska yaryar, basaska iyo mitrooga. Tagaasida sidoo kale ma yara. Basaska laguma talinayo maadama wax waliba ku qoran yihiin Carabi waana fowdo. Suura gal maaha hadaad naag tahay. Tareenka dhulka hoostiisa mara waa fududahay in la isticmaalo oo wuxuu leeyahay gaariyo gaar ah oo loogu talagalay ragga iyo dumarka, laakiin dhab ahaantii ma gaadho magaalada oo dhan. Dabcan, waa raqiis.
Waad isku dari kartaa taksiga, habka ugu fiican ee gaadiidka haddii aad dalxiis tahay. Waxaa jira saddex nooc oo tagaasida, kuwa aan haysan hawo qaboojiye ama mitirka baarkinka, (madow iyo duug), kuwa cad, kuwa cusub iyo kuwa casri ah oo leh baarkinka baarkinka (haddii aad dooraneyso mid, kan dambe ha ahaado), waxaana sidoo kale jira tagaasida jaallaha ah laakiin waa inaad wacdaa oo aad ku weydiisataa taleefan.
Maxaa lagu booqanayaa Qaahira
Markaad ku talinayso booqashooyinka iyo socodka Khibraddu aad ayey u qiimo badan tahay, sidaa darteed talooyinkeygu way ka duwanaan karaan kuwa dalxiisayaasha kale, laakiin si aan u qoro waxaan ka fikiray safarkayga, tii walaashay oo iyaduna halkaas ku soo martay iyo sodohday. Saddex khibradood oo kala duwan xilliyo kala duwan oo sanadka ah, markaa waxaan u maleynayaa inay noqon doonaan talo bixinno wanaagsan dhammaantoodna waxay ka jawaabayaan su’aasha ah: haddii maanta aad qaadatay qof aan waligiis cag saarin Qaahira, xagee geyneysaa
Qasriga waxay noqon laheyd meesha ugu horeysa ee laga qaado sawiro dherer wanaagsan, aragti fiicanna leh. Waa qalcadda dhexe ee Islaamka oo laga dhisay buurta Mokkattam oo ka qabow bartamaha magaalada. Difaacyadeeda waxaa la dhisay qarnigii 85aad si ay isaga caabiyaan Saliibiyiinta waxayna in muddo ah ahayd wadnaha dawladda. Wuxuu ku leeyahay Saladino el Grande dib-u-habeyn badan iyo guga qoto dheer ee mitirka XNUMX ee aan maanta qiimeyn karno.
Markii dambe Cusmaaniyiintu waxay dhiseen masaajid waxayna sameeyeen dhismeyaal cusub ilaa maantana waxaa ku jira afar madxaf: Matxafka Gawaarida, Matxafka Milatariga Masar, Matxafka Booliska Masar iyo Matxafka Al-Gawhara Palace. Cagihiisa waxaa ku yaal shabakad isugu jirta waddooyin, luuqyo iyo masaajiddo.
Isagoo ka hadlaya matxafyada Matxafka Masaarida ee Qaahira Waa meel aan laga fursan karin: waxay leedahay uruurinta ugu weyn ee qadiimiga Masar oo leh in ka badan 120 kun oo walx, in kastoo dhammaantood aan la soo bandhigin. Matxaf kale oo barbar socda ayaa umuuqda inuu ku dhuumaaleysanayo bakhaaradiisa. Matxafka ayaa ku yaal Fagaaraha Taxriir oo waxyeello iyo xatooyo ka soo gaadhay jabhaddii 2011. Ceeb. Dhismuhu wuxuu leeyahay laba dabaq oo waaweyn oo leh papyri iyo qadaadiic qadiimi ah oo lagu soo daabacay lacag, naxaas iyo dahab, taallo, kiniinno, sarcophagi iyo boqolaal walxo oo ka yimid qabuuraha farooniyiinta.
Matxafkan wuxuu furmayaa maalin kasta 9 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo, inta lagu guda jiro Ramadamna wuxuu xirmayaa 5 galabnimo Gelitaanku waa LE 60 qofkiiba iyo LE 30 ardaykiiba, laakiin waxaad bixinaysaa lacag dheeraad ah qolalka qaarkood sida Royal Mummies Hall (LE 100) iyo Centennial Gallery, LE 10. Matxafku wuxuu ku yaalaa xaafada Wust el balad, xarunta, waa meel wanaagsan oo lagu raaxeysto nolosha cawayska ee caasimada Masar.
Meel kale oo wanaagsan oo goor hore wax laga cuno oo laga daawado qorrax dhaca qorraxda iyadoo la fiirinayo Ahraamta waa Beerta Al Azhar. Runtii waa jardiin weyn oo hadiyad ahaan ka timid Agha Khan IV sannadihii 80-naadkii. Wali waxay ku jirtaa horumar laakiin waa goob ku habboon in lagu raaxaysto gabbal dhaca. Dhinaca kale waxaa sidoo kale jira Qaahira Coptic, goob leh qabuuro masiixiyiin iyo kaniisado si lama filaan ah kuu xusuusinaya jiritaanka diinta kiristaanka. Yaab
Gees kale ayaa ah Qaahira Islamic kaasoo dhammaaday dib u soo kabashadiisa dhowaan. Waa nooc matxaf Islaami ah oo hawada furan. Waxaa jira Masaajidka Ibnu Tulun ee qarnigii XNUMXaad iyo Matxafka Gayer-Andernson oo ka shaqeeya guri qarnigii XNUMXaad ee ganacsade Ottoman ah.
Markay tahay tukaamaysiga Suuqa Khan el-Khalili Waa mid ka mid ah suuqyada ugu caansan adduunka. Waa la daboolay oo taariikhdeedu waxay ahayd 1382. Waxay ahayd xarunta ganacsiga dhir udgoon iyo suuq wanaagsan oo maanta aad wax yar ka iibsan karto wax kasta, laga bilaabo saliidaha lagama maarmaanka ah ilaa jiinis. Socodka waxaad ku dhammeysan kartaa shaah maqaayada Fishawi, oo ah mid ka mid ah makhaayadaha ugu da'da weyn magaalada.
Ku dul soco webiga Niil a felucca waa lagugula talinayaa. Waad ka kireysan kartaa qarka hore ee afarta xilli Hotel. Dabcan, caasimadda Masar waxaa ku yaal matxafyo kale oo badan: Matxafka Beeraha, Matxafka Boostada, Matxafka Tareenka, Matxafka Milatariga, Matxafka Caafimaadka Qasr Al-Eini iyo qasriyo badan. Waxaan dhihi lahaa iyadoo laga duulayo danahaaga, abaabulo booqasho qaar ka mid ah matxafyada.
Waxaan booqday Villa of Fircoon. Waa matxaf ku yaal bannaanka xarunta oo kuu oggolaanaysa inaad sameyso a safarka waqtiga saddex kun oo sano ka hor. Waxaad ku safraysaa kanaallada dusha doonyaha mootada waana nooc ka mid ah baarkinka madadaalada taariikhiga ah ee dib u dhiska guryaha, daaraha waaweyn iyo macbudyo. Haddii aad raacdo carruurta waa habka ugu wanaagsan ee sheekada loogu gudbin karo. Dabcan sidoo kale waxaan booqday Ahraamta, goob iila muuqatay mid wasakh badan aniga.
Maxaan talo kaa siin karaa inaad tan ku samayso, la booqasho Qaahira? Way ku habboon tahay inaad ku aaddo booqasho Pyramids-ka Giza. Haa, waan ogahay inaadan jeclayn, laakiin way ka sii fiican tahay sidan. Haddii aad keligaa tagtid, waa inaad kala hadashaa taksiga ku qaadaya oo waxay kaa doonayaan inay kaa qaadaan wixii ay doonaan. Haddii aad weli rabto inaad keli tagto markaa waa inaad metro-ga u qaadataa saldhigga Giza halkaasna ka raac baska yar. Way ka jaban tahay, xitaa.
Aragtida Ahraamyada Giza waa kaarka boostada ee qadiimiga ah iyo kan casriga ah. Maxaan uga jeedaa Ka raadi Google sawirro waxaadna ogaan doontaa kumanaan kaararka boostada ee cajiibka ah ee Ahraamta laakiin waxba ma aha sida iyagoo nool oo kale. Qayb ahaan maxaa yeelay waa kuwo la yaab leh laakiin qayb ahaan maxaa yeelay dhinaca aan waligood ka muuqan sawirrada waxaa ku yaal xaafad dhan: guryo iyo guryo iyo xitaa Pizza Hut oo ku yaalliin Sphinx hortiisa. Ma rumeysan kartaa? Caalamiyeynta!
Waa inaan kaaga digaa geel raacid: darawalada waa cabsi badan yihiin, waxay kugu dhibaateyn doonaan su'aalo waxayna ku siin doonaan qiimo kala duwan iyadoo ku xiran wadanka aad ka timid. Waxay sidoo kale kuu sheegi doonaan inay mamnuuc tahay inaad ku dhex socotid Ahraamta, dhammaantood adiga ayaa kiraysta socod. Oo waxaa jira iibiyeyaal ah Waxyaabaha lagu sameeyo Shiinaha meel kasta.
Khibrado xun uma aanan la kulmin booliska iyo ilaalada aagga, laakiin ma jiraan wax yar oo warbixinnada dalxiisayaasha ee ay khiyaaneeyeen isla shaqaalahan. Taladayda: ha aaminin iyagana, dhammaantood lacag ayey rabaan. Runtu waxay tahay inay tahay meel cajaa’ib leh dadka xun xun qaarkood, oo doonaya inay lacag kaa helaan oo ay uga faa’iideystaan ​​heerkaaga dalxiis. Cabsi. Waxaas oo dhan haddaad keligaa tagtid. Waa wax ka yar ama ka yar wixii aniga iyo walaashay igu dhacay maxaa yeelay soddoggay, oo dalxiis ku maqnaa, waxay soo mareen khibrad gebi ahaanba ka duwan.
Dabcan, qofna kama tegi karo Giza la'aantiisa gal gudaha Ahraamta Weyn, booqo Matxafka Doomaha Qorraxda, ka fakar Sphinx iyo haddii aad awoodid, markhaati ka ah Muuqaal Cod iyo Iftiin. Sida iska cad, booqashada dhammeystiran ee Qaahira waa inay ku jirtaa dalxiisyo iyo safarro, Luxor, Abu Simbel iyo noocyada noocaas ah. Munaasabad kale waxaan ka hadli doonaa safarradaas. Muhiimadda maanta waa waxa aan ku qaban karno Qaahira oo aan ogaano taas, haddii aan nahay dumarka aan guursan, ma heli doonno waqti sidan u wanaagsan.
Masar maahan dal kaligeed dalxiis lagu tagoAad ayey kuu soo eegaan taasna way kaa nixinaysaa. Inay u maleeyaan inay u maleynayaan in sababta oo ah kaligaa tahay waxaad tahay dhillo wax badan ma caawinayso. Feejignow!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Qaahira » Qaahira, maxaa lagu arkaa magaalada aakhiro
Ciidaha Xeebta Amalfi ee Talyaaniga
Las Loras, oo ah dhul dabiici ah oo u gaar ah Isbaanishka